Global Voices teny Malagasy » Lahatsary : Fananihana An’i Chirripó, Teboka Avo Indrindra ao Costa Rica · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Avrily 2012 23:28 GMT 1	 · Mpanoratra Juliana Rincón Parra Nandika (fr) i Claire Ulrich, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Costa Rica, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Tsidika, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina
Cerro Chirripó  no avo indrindra any Costa Rica, izay 3 820 metatra ambonin'ny ranomasina. Nandritra ny vanim-potoana maro samihafa, nahasintona mpananika tendrombohitra maro avy ao an-toerana sy avy any ivelany ny fiakarana aminy. Ahitana ny fomba fananihana azy samihafa tokoa ny lahatsary manaraka etoana. Ny voalohany mampiseho ny iray amin'ny fananihana voalohany, tamin'ny taompolon'ny 1960, ary taty aoriandriana kokoa ny manaraka.
Ao amin'ny fampahafantarana Fiakaran'ny Herimpo : nananika an'i Chirripó tamin'ny 1960  [es], nanapa-kevitra ny hanao dia maharitra ny tanora lahy sy vavy hahatratra ny teboka faratampon'i Costa Rica. Azontsika arahina ny dia [anjoria] tamin'ny alalan'ny fiara, sarety, ambony soavaly hatramin'ny fotoana tsy maintsy mananika ny tampony amin'izay, izay naharitra herinandro.
Fizarana 3  Tafiditra ao amin'ity fizarana ity ny fiposahan'ny masoandro hatreny an-tampony eny, ary ahitana ny ranomasimbe pasifika sy ny ranomasina Karaiba hatreny an-tampony eny, raha manga dia manga ny lanitra. Amin'ny andro mazava ihany koa no ahitana ny setroka avoakan'ny volokano Turrialba.
Fizarana 4  sy 5. 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/04/23/32446/
 Fiakaran'ny Herimpo : nananika an'i Chirripó tamin'ny 1960: https://vimeo.com/39788643
 Fizarana 1 :: http://www.youtube.com/watch?v=2Azdlj6HDl4
 Fizarana 2 :: http://www.youtube.com/watch?v=4SJ2YEPrlSk
 Fizarana 3: http://www.youtube.com/watch?v=YzIG1CFrBYA